Rey Miguel na José Leonardo Chirino, akara nke nguzogide ịgba ohu na Venezuela - AFRIKHEPRI
Rey Miguel na José Leonardo Chirino, akara nke iguzogide ịgba ohu na Venezuela
Oge nke abuo - Robert kwadoro (Audio)
Satọde, Julaị 11, 2020
Welcome Ịgba ohu
Nguzogide nke ịgba ohu na Venezuela malitere n'oge. Ndekọ nke mbụ edere mere na 1532 na Coro mana ọgba aghara a kacha mara ama weere ọnọdụ na ogbunigwe Buria na 1552 Miguel (onye a maara dị ka El Negro Miguel ma ọ bụ Rey Miguel), nke pụtara “Nwa Miguel ojii” na “Eze Miguel” n'otu n'otu).
Ohu ohu Africa, MIGUEL nupụrụ onye nche n'ihi ọnọdụ adịghị mma nke ọ dabara na ogbunigwe. Akụkọ ọdịnala na-akọ na ọ nwere ike ijide mma agha na iti nke onye na-ele ya anya na site na nkwado nke ndị ohu ndị ọzọ, o wepụrụ ụfọdụ ngwa agha n'aka ndị Spanish, wee soro nwunye ya Guiomar. nwa ya nwoke na ndị ohu ndị ọzọ, ha gbalagara n'ugwu. Mgbe ha rutere ebe ahụ, o hibere obodo ebe a na-echekwa ego, hazie gọọmentị, wuo nnukwu mgbidi gburugburu obodo ahụ, wuo ụlọ, họrọ onye nchụàjà ka ọ rụọ ọrụ ma nyere ndị mmadụ aka ka ha mee. Okpukpe ndị nna nna ha, ma nwee ike ịhazi ndị agha. Site na ndị agha ya, Miguel nwere ike iguzogide ọtụtụ mwakpo ndị Spen. N'abalị, ya na ụfọdụ ndị ikom ya bara na mbara ala gbara gburugburu iji mee ka ndị ohu ndị ọzọ soro ha. Indfọdụ ndị India sonyekwara n’otu ebe a na-eche nche, nke ndị nke obere ji nke nta nke nta. Onu ogugu nke ndi agha ya di na 1200, na onu ogugu ndi mmadu n’agbata puku mmadu iri. A họpụtara Miguel ka ọ bụrụ eze, nwunye ya na nwunye ya na nwa nwoke nke nọchiri ya.
E meriri ndị agha nke maroons mgbe ndị Spen nke mpaghara gbakọrọ na enyemaka nke onye India aha ya bụ Tocuyo, na mberede wakporo ọnụ ụzọ alaeze ọhụrụ ahụ. Ha gburu Miguel ma tie ndị agha ya ihe. E jidere ụfọdụ n'ime ndị bụbu ndị ohu ma mee ndị ohu ọzọ, mana ihe ka ọtụtụ gbapụrụ na-eme ka obodo ndị ọzọ na-eche nche na mba ahụ. Obodo nke ndị gbara ọsọ ndụ nọgidere na-eto na narị afọ nke 1720 na 30.000, na na 60.000, e nwere ihe dị ka puku mmadụ iri atọ ga-emegide XNUMX ndị ka na-arụ ọrụ n'ugbo ahụ. Ọbụna eze nwanyị Guiomar, onye bụ ma eleghị anya nwanyị mbụ na nwa nwanyị nwanyị ojii na America, ejidere ya na nwa ya nwoke wee mee ohu ọzọ.
José Leonardo Chilino, amụrụ Eprel 25, 1754, bụ ohu, nke nna ya ukwu Spain ji mee ihe na West Indies na Latin America. Ọ lụrụ otu ohu aha ya bụ Maria de los Dolores onye mụụrụ ya ụmụ atọ: Maria Bibiana, Rafael María na José Hilario. Ọ nọ n'oge ahụ na Santo Domingo n'ókèala nke Haiti ugbu a, wee hụ ọgba aghara dị iche iche ma na-azụlite echiche mgbanwe.
Mgbe ọ laghachiri na Venezuela, ọ zutere ndị ohu ndị ọzọ n'otu ụlọ ọrụ a na-akpọ Macanillas bụ onye chere echiche nnupụisi dịka ya, Joseph Caridad Gonzalez, onye Congo bụ onye maara ọtụtụ ihe banyere mgbanwe French.
Site na Mgbanwe nke France na mgbagha nke weere ọnọdụ na Haiti (ndị mere ka mkpochapụ nke ịgba ohu na nnwere onwe nke agwaetiti ahụ), ya na ndị ohu ya kpebiri ime otu ihe ahụ maka mkpochapụ nke ịgba ohu na Venezuela na nguzobe nke Republic. Mana ezughi oke, n'agbanyeghị oke mpaghara, ọgba aghara ahụ agafere n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mba ahụ. E jidere ya, gbuokwa ma gbuo ya na Spanish na 10 December 1796. (na foto: ọ bụ akpụrụ akpụ nke ihu ya dị na Caujarao, steeti Falcon)
Onyinyo ozo nwekwara ya n’ihu ọdụ ụgbọ elu nke na-aza aha ya, n’obodo Coro, ka nọ na steeti Falcon.
Onye bu Francisco Del Rosario Sanchez, bu nna nnwere onwe nke Santo Domingo?
N’Ijipt oge ochie, a na-akpọ ndị mkpọrọ “skr-cnh” nke pụtara “n’agha“
Tebụl emerald nke Thot l'Atlante (Audio)
Afrikhepri Foundation sur O meputara “mmiri mmiri zoro ezo” site na usoro nke ghagbanwe ugbo: "Ejirila usoro ya n’ụzọ gara nke ọma na India maka ịkọ mkpụrụ, ahụekere, nkochi, ọka…" Jul 8, 19:25
Afrikhepri Foundation sur Ụmụ akwụkwọ Uganda na-eji ngwa mkpanaka na-achọpụta ọrịa ịba: "Studentsmụ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ Uganda mepụtara ngwa eji ekwu okwu gbasara ọrịa ịba." Jul 8, 19:18
Afrikhepri Foundation sur Okwu nke Malcolm X: "Okwu nke Malcolm X" Jul 8, 19:16